ỊCHEKWA NA NRỤZI NGWAỌRỤ GA-ERI APPLE IHE FỌRỌ NKE NTA KA Ọ BỤRỤ NDE $ 7 - AKỤKỌ - 2019
Otu ụlọikpe Australian nyere iwu nke ọma ihe dị nde nde dollar Australian na Apple, nke dị nde dollar 6.8. Otutu ụlọ ọrụ ahụ ga-akwụ ụgwọ maka ịjụ ịrụzi smartphones na-akwụ ụgwọ, nke a na-ejigide n'ihi "njehie 53", ka akwụkwọ akụkọ Australian Financial Review na-akọ.
Ihe a na-akpọ "njehie 53" mere mgbe etinyechara ya na iPhone 6 nke usoro nke itoolu nke iOS ma dugara na mkpọchi ngwa ngwa. Nsogbu ndị ahụ na-ahụ maka ndị na-enyebu smartphones ha aka na ụlọ ọrụ ọrụ n'enweghị ikike iji dochie bọtịnụ Home na ihe mgbagwoju anya metụtakwara nsogbu. Dị ka akọwapụtara n'oge ahụ, ndị nnọchianya nke Apple, mkpọchi ahụ bụ otu n'ime ihe nchedo nchebe mgbe niile, nke e mere iji chebe ngwaọrụ site na ịnweta ohere n'enweghị ikike. N'ebe a, ụlọ ọrụ ahụ nwere "njehie 53", ụlọ ọrụ ahụ jụrụ ịgbagha akwụkwọ ikike, wee mebie iwu nchebe ndị ahịa Australia.